World Report 2020: Itoophiyaa | Human Rights Watch
Ajjeechaan aangawoota mootummaa olaanoo waxabajjii 22 raawwate kan mootummaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa waliin hidhata qabaachu ibse, akkasumas raafamni siyaasaafi walitti bu’insi hawaasaa magaala guddoo biyyaattii Addis Abaabafi nanoo Oromiyaa keessatti sababa taatee rogeessa Oromoo beekamaafi abba qabeeyna miidiyaa Jawaar Mohammed irratti raawwateen walqabatee ka’ee ture filannoo bara 2020f karoorfamen dura walgarreeffannaan dabalaa dhufuu ifa godheera.
Mootummaan Itoophiyaa ammas barmaata intarneeta guutumatti cufuu itti fufeera. Taatee Waxabajjii kan yaalii fonqolcha mootummaati jedhame hordofuun muummichi Ministeeraa barbaachisumma intarneeta cufuu, “intarneetiin qilleensas biishaanis miti” jechuun gotcha sirrii ta'uu dubbatanii turan. Tajaajilli intarneeta cufamee ture Adoolessaa 2 guutummatti deebi’eera. Waxabajjii calqabarras mootummaan tajaajila intarneeta sababa tokkollee otoo hin kenniin torbee tokkoof adda kutee ture.
Akka Waldaan Baqattoota Adunyaa (IOM) gabaaseetti baay’inni namoota qeeyee isaanii irraa buqqayanii hedduudha. Lakkoofsi baatii Adoolessaa akka ibsutti namoonni miiliyoona tokkoo fi kuma dhibba jaha ta’an qeeyee isaanirra buqqayanii jiru. Kanneen keessaa dhibbeentaan 66.4 sababa walitti bi'insa uumameen kan buqqayaniidha. Akka gabaasa dhaabbata buqqayinsa keessoo hordofuu (IDMC)ti ji’oota jahan calqaba bara 2019 qofatti walitti bu’insi sabaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Somaaleefi Uummata kibbaatti mudate buqqayinsa haaraa 552,000f sababa ta’eera.
kan heerri keenneef mirkanaayu dhabuun wal gaarreffannafi walitti bu’insaaf sababa ta’aa dhufeera. Wal gaarreffannaan kun yeroo, naannoon Oromiyaa ijaarsa seeraan alaa naannoo daangaawaa Finfinnee irratti ijaaraman lakkoofsaan 12,000 ta'an diiguuf baatii Guraandhalaa karoorfatu haalan hammaate ture.